Tsy ny lehilahy ihany: tratra ireo vehivavy mpivarotra rongony sy toaka gasy | NewsMada
Tsy ireo lehilahy no tompon’ny ketrika! Voasambotry ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina (Stup,) afakomaly teny amin’ny faritra Ambohijanaka sy Anosizato Atsimo ny vehivavy roa voarohirohy amina raharaha fivarotana toaka gasy sy rongony…
Niainga avy amin’ny loharanom-baovao no nahafahan’ny polisy nanao fisamborana ireto roa vavy mpanao trafikana zava-mahadomelina ireto. Raha ny fanazavan’ny polisy, efa hatramin’ny taon-dasa no nanaovan’izy roa vavy ireto izao varotra toaka gasy sy rongony izao ao an-tranony eny Ambohijanaka sy Anosizato. Nidina ifotony teny an-toerana ny polisy ka afakomaly no voasambotra tao Ambohijanaka ny vehivavy iray 29 taona niaraka tamin’ny fonosan-drongony sy toaka gasy 20 litatra. Tokony ho tamin’ny 11 ora sy 30 mn kosa no tratra tao Anosizato ilay vehivav iray 23 taona. Fonosan-drongony lehibe dimy no tratra tao an-tranony nandritra ny fisavana azy. Efa nogiazana avokoa ireo zava-mahadomelina tratra ireo.
Sprinter roa tratra ireo toaka gasy 1 180 litatra …
Voasambotry ny polisy misahana ny ady amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina (Stup) teny Mahazo, afakomaly maraina, ny lehilahy efatra mitondra toaka gasy 1 180 litatra. Loharanom-baovao no nahafantaran’ny polisy fa misy fiara sprinter roa mitondra toaka gasy miala avy any Vatomandry hihazo an’Antananarivo. Nidina teny amin’ny RN2 avy hatrany ny polisin’ny Stup, tamin’io fotoana io. Tokony ho tamin’ny 4ora tolakandro, voasakana teo Mahazo ny fiara Sprinter roa, rehefa nosavaina ny fiara dia nahitana bidao amin’ny 30 litatra sy bidao miisa efatra amin’ny 20 litatra, izay notsindrina katsaka sy ampombo. Ny fiara manaraka, nahitana bidao miisa efatra amin’ny 20 litatra, izay mbola notsindrina entana ihany koa ny nanafenana azy. Nomarihin’ny polisy fa ny telo amin’izy efa-dahy ireo no tompon’ireto toaka gasy ireto raha mpivarotra kosa ny iray. Araka ny lalàna mifehy, ampandoavina lamandy 10 000Ar isaky ny litatra izy ireo mialoha ny hanolorana azy ireo ny fitsarana.